Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Awards Web Golden
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay khusaysaa dhammaan badeecada, adeegyada iyo websites ay bixiyaan Golden Web Awards ama bangiga kabo ama shirkadaha la jaalka. Mararka qaar, laga yaabaa in aan boostada ogeysiisyada gaarka gaar ah wax soo saarka ama alaabta Center Help si ay u sharxaan waxyaabaha our si faahfaahsan.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, fadlan si xor ah u nala soo xiriir xagga website ama noogu soo dir
Macluumaadka aan ururino iyo sida aan u isticmaalno
Waxaa laga yaabaa inaan u ururiyaan noocyada soo socda ee macluumaadka:
Macluumaadka aad bixiso - Marka aad nala soo xiriir, waxaan weydiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaa laga yaabaa inaan isu geeyo warbixinta aad soo gudbiso in labada dhinac saddexaad si ay kuu siiyaan waayo-aragnimo fiican iyo si loo wanaajiyo tayada adeegyada our. Waayo, adeegyada qaarkood, laga yaabaa in aan idin siiyo fursad ay ku baxdo ee isku macluumaadka sida. Your maamulaha yeelan doonaan in ay helaan macluumaad aad account oo ay ku jiraan aad email. La tasho Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah maamulaha domain ee aad macluumaad dheeraad ah.
Cookies - boggaga web Marka aad booqato Golden Web Awards ee, waxaan kuu soo diri mid ama ka badan cookies si aad computer ama qalab kale. Waxaan isticmaalnaa cookies si loo hagaajiyo tayada adeegga, oo ay ku jiraan for kaydinta la door user, wanaajinta natiijooyinka raadinta iyo soo xulidda ad. Golden Web Awards sidoo kale wuxuu isticmaalaa cookies in adeegyada advertising si ay u caawiyaan xayeysiiya iyo daabacayaasha u adeegaan oo ay u maareeyaan xayeysiis guud ahaan internetka.
Log warbixin - Marka aad ka heli boggaga web Web Awards ee Golden via browser a, codsiga ama adeeg kale macmiilka, server si toos ah u qoraan macluumaadka qaarkood. Guda server waxaa ka mid ah macluumaadka sida codsigaagu web, aad is dhexgalka adeeg, cinwaanka Protocol Internet, nooca browser, luqadda browser, taariikhda iyo waqtiga codsigaaga iyo mid ama ka badan cookies in si gaar ah loo ogaado waxaa laga yaabaa in aad browser ama aad account.
isgaarsiinta User - Marka aad email ama ku la xariirka in Golden Web Awards diri, laga yaabaa in aan hayn isgaarsiinta kuwa si loo farsameeyo weydiimaha aad, jawaab codsiyada aad una horumarino adeegayaga. Marka aad soo dirto oo aad hesho farriimo SMS ama mid ka mid ah adeegyada bixiya shaqeynayaan SMS, waxaa laga yaabaa in aan ururino oo aan u ilaaliyaan macluumaadka la xidhiidha fariimaha kuwa, sida lambarka telefoonka, side wireless la xiriira lambarka telefoonka, content ee fariinta, iyo taariikhda iyo waqtiga macaamil. Waxaan u isticmaali cinwaanka emailkaaga inuu kula soo xiriiro oo ku saabsan adeegyada.
Xiriir la Adeegyada Google on goobaha kale - Waxaan bixinaa qaar ka mid ah adeegyada on ama iyada oo loo marayo goobaha kale ee webka. macluumaadka shakhsiga ah in aad u gudbiso goobaha kuwa waxaa laga yaabaa in u soo diray inuu Google si ay u bixiyaan adeega. Waxaan ka arrinsashada macluumaadka sida hoos Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this.
Codsiyada Xisbiga Saddexaad - Awards Web Golden laga yaabaa in codsiyada saddexaad la heli karo xisbiga, sida darbi ama kordhin, iyada oo loo marayo adeegyada ay. Macluumaadka la ururiyey by Awards Web Golden marka aad awood codsiga dhinac sadexaad la farsameeyo hoos Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this. Macluumaadka la soo ururiyay by bixiyaha codsiga dhinac saddexaad waxaa maamula siyaasadaha gaarka ah ay.
data Location - Awards Web Golden waxay bixisaa adeegyada goobta-karti (calaamadaha GPS sida diray by qalab mobile) ama macluumaad loo isticmaali karo in ay qiyaasaan meel (sida ID cell ama cinwaanka IP).
goobaha kale - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay khusaysaa adeegyada Golden Web Awards kaliya. Annagu ma lagu maamulo goobaha soo bandhigay sida natiijooyinka raadinta, goobaha ay ka mid yihiin codsiyada Awards Web Golden, alaabta ama adeegyada, ama links ka gudahood adeegyada kala duwan. Kuwani goobood oo kale meel laga yaabaa in cookies iyaga u gaar ah ama files kale on your computer, ururiyaan xogta ama macluumaadka shakhsiyeed dalbi aad ka.
Waxa intaa dheer in kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aan u isticmaalno macluumaadka aan u ururiyaan si ay u:
Bixi, ilaaliyaan, ilaaliyo, una horumarino adeegayaga (oo ay ku jiraan adeegyada advertising) iyo horumarinta adeegyada cusub; iyo
Ilaali xuquuqda ama hantida Awards Web Golden.
Haddii aan u isticmaalno macluumaadka this hab ka duwan tahay ujeedada taas oo waxaa la soo ururiyey, ka dibna waxaan ku weydiin doonaa ogolaanshahaaga ka hor adeegsiga sida.
Golden Web Awards maaraysa macluumaadkaaga shakhsiyeed on server our ee dalka Mareykanka of America iyo dalalka kale. Mararka qaarkood, waxaan ka arrinsashada macluumaadka shakhsiga ah meel ka baxsan wadankaaga.
daalacashada intooda badan waxaa hore u qotonsaday inay aqbasho cookies, laakiin aad dib kartaa browser in ay diidaan oo dhan cookies ama si ay u muujiyaan marka cookie ah loo soo diray. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah muuqaalada iyo adeegyada waxaa laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo, haddii cookies aad naafo tahay.
Golden Web Awards isticmaalaa cookies advertising retargeting Google iyo Yahoo goobaha lamaanahaaga Most iyo adeegyo kale oo gaar ah si ay u caawiyaan xayeysiiya iyo daabacayaasha u adeegaan oo ay u maareeyaan xayeysiis guud ahaan internetka. Waxaad ka arki kartaa iyo maarayn xayeysiis doorbidkaaga la xidhiidha cookie this.
Awards Web Golden keliya wadaaga macluumaadka shaqsi ah la shirkadaha kale ama shakhsiyaadka ka baxsan Golden Web Awards ee soo socda xaalado xaddidan:
Waxaan leenahay ogolaanshahaaga. Waxaan dalbanaa dooran-in ogolaansho in la wadaago wixii macluumaad xasaasi ah shakhsi.
Waxaan ku siin macluumaad sida in ay shuraakada our, Shirkadaha la jaalka ah ama ganacsiyada kale ku kalsoon tahay ama qof ujeeddo ah ka baaraandegidda macluumaadka shakhsiyeed naga wakiil ah. Waxaan u baahan tahay in xisbiyada waa isku si loo farsameeyo macluumaadka sida ku salaysan tilmaamo iyo in la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this iyo wax kasta oo sir kale oo ku habboon iyo tallaabooyin lagu sugayo ammaanka.
Waxaan leenahay a aaminsan iimaanka wanaagsan in ay helaan, isticmaalka, ilaalinta ama bixinta macluumaadka kale waa macquul ah lagama maarmaan si ay u (a) dhergin sharci kasta oo qabanaya, Xeerarkii, nidaamka sharciga ah ama codsi dowladda fulin, (b) dhaqan Shuruudaha lagu dabaqi karo of Service, oo ay ku jiraan baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada ka iman kara oo dhanba, (c) ogaado, looga hortago, ama haddii kale wax looga qabto musuqmaasuq, arrimaha amniga ama farsamo, ama (d) difaaco waxyeelo xuquuqda, hanti ama ammaanka Awards Web Golden, dadka isticmaala ama dadweynaha sida looga baahan yahay ama sharcigu ogol yahay.
Waxaan qaadaan tallaabooyin ammaanka ku habboon si ay u difaacaan aan la ogalayn in ay helaan ama laga bedelo aan la ogalayn, siidaynta ama burburinta xogta. Waxaa ka mid ah dib u eegista gudaha ee xog ururinta our, kaydinta iyo processing dhaqanka iyo tallaabooyin lagu sugayo ammaanka, ay ka mid yihiin sirta ku haboon iyo tallaabooyinka nabadgelyo tahay in la ilaaliyo aan la ogalayn in ay helaan hababka halka aan kaydka xogta shakhsiga.
Waxaan xaddido helitaanka macluumaadka shakhsiga ah in shaqaalaha Golden Web Awards, qandaraaslayaasha iyo wakiilada kuwaas oo u baahan in la ogaado in macluumaadka si loo farsameeyo naga wakiil ah. Shakhsiyaadkaas waxaa saaran waajibaad sir iyo laga yaabaa in ay anshaxa, ay ka mid yihiin joojinta iyo xukun denbiilennimo, hadii ay ku guuldareystaan ​​in ay fuliso waajibaadkaaga, kuwaas oo.
Helitaanka iyo xariirta macluumaadka shakhsiyeed
Marka aad isticmaali Golden adeegyada Web Awards, waxaan dadaal niyad fiican si ay kuu siiyaan helitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo sidoo kale in la saxo xogta this haddii ay tahay sax ahayn ama in aad tirtirto data sida marka aad codsato haddii aan si kale loo baahan yahay in la hayn sharciga ama ujeedooyin ganacsi sharci ah. Waxaan ka codsan users shaqsi si naftooda iyo macluumaadka la codsaday in laga heli aqoonsado, saxo ama la saaro ka hor ka baaraandegidda codsiyada sida, waxaana laga yaabaa in aan hoos u codsiyada nidaamka in ay yihiin macquul ahayn soo noqnoqda ama nidaamsan, u baahan tahay dadaal farsamo dhigmin, wiiqi gaarka ah ee dadka kale, ama uu noqon doono mid aad u shaqayn karto (tusaale ahaan, codsiyada ku saabsan macluumaadka ku nool on cajalado gurmad), ama kaas oo ay helaan haddii kale looma baahna. Si kastaba ha ahaatee, halkaas oo aanu ku siin helitaanka macluumaadka iyo edbinta, waxaan u samayn adeeggan lacag la'aan ah, marka laga reebo haddii ay sidaas samaynaya u baahan tahay dadaal ku munaasab ahayn. Sababta oo ah habka aan u ilaaliyaan adeegyada qaarkood, ka dib markii aad tirtirto macluumaadkaaga, nuqulo haraaga laga yaabaa inay qaadato muddo ah ka hor inta aan la tirtiray ka server firfircoon iyo hadhaan in nidaamka gurmad. Fadlan dib u adeega Xarumaha Caawinta wixii macluumaad dheeraad ah.
Golden Web Awards raacaysaa Safe Harbor ee Framework US-EU iyo Safe Harbor Framework US-Swiss ah sida ku xusan by laga xoreeyo dalka ah. Department of Commerce ku saabsan ururinta, isticmaalka, iyo xafidida macluumaadka shakhsiyeed ee waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub iyo Switzerland. Google ayaa xaqiijiyey in ay u dhaqmayso Privacy Safe Harbor ah Mabaadi'da ogaysiis, doorasho, kala iibsiga hore u sii wadeen, ammaanka, daacadnimada xogta, helitaanka, iyo fulinta. Si aad wax badan oo ku saabsan barnaamijka Safe Harbor bartaan, iyo si aad u aragto shahaadada Google, fadlan booqo bogga internetka ee Safe Harbor.
Awards Web Golden si joogto ah dib u eegis ku ay waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this. Marka aan helno cabashooyin qoraal ah oo rasmi ah, waa siyaasad Golden Web Awards ee la xidhiidh user ee ka cabanaya oo ku saabsan isaga ama iyada walaac. Waxaan la shaqayn doonaa maamulka sharciyeed ku habboon, oo ay ku jiraan maamulka ilaalinta xogta degaanka, si loo xaliyo wax kasta oo cabashooyinka ku saabsan wareejinta xogta shakhsiga ah oo aan lagu xalin karaa inta u dhaxaysa Golden Web Awards iyo shaqsi ahaan.
OGEYSIISKA DHAQANKA ASTURNAANTA
OGEYSIISKANI WUXU SHARAXAYAA SIDA MACLUUMAADKA ADIGA KUGU SAABSAN LOO ISTICMAALI KARO LOONA BIXIN KARO IYO SIDA AAD U HELI KARTID MACLUUMAADKAN. FADLAN DIB THIS TAXADAR LEH.
Isticmaalida iyo bixinta:
Xaqa aad u leedahay dib Privacy Practices
Sida sharcigu ogol yahay, waxaan xaq u leedahay in wax laga beddelo ama baddalaan siyaasadaha iyo hab-dhaqannada asturnaanta leenahay. Isbeddelladan ee siyaasadaha iyo hab-dhaqannada our yaabaa in loo baahdo by isbeddel ah ee federaalka iyo sharciyada gobolka iyo xeerarka. Wax kasta oo sababta dib, kuwaas oo, waxaan ku siin doonaa ogeysiis dib loo eegay on sameyso booqashadaada ku xigta xafiiska. The siyaasadaha iyo hab dhaqanka ee dib loo eegay waxaa loo isticmaali doonaa in dhammaan macluumaadka caafimaadka ee badbaadsan ee aanu hayno.
La xiriir Sarkaalka Arrimaha Asturan ee wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hab-dhaqannada asturnaanta. (Haddii aad jeclaan lahayd in ay soo gudbiyaan a comment ama cabasho ku saabsan hab-dhaqannada asturnaanta, aad sidaas samayn kartaa adigoo warqad muujinaya walaac aad u diraya):
Sarkaalka Arrimaha Asturan
SOCIAL MEDIA Hawlgelinta AFEEF
Waxaad si cad u qirayaa in aad mas'uul ka dhan la xiriira ammaanka, gaarka ah, iyo sirta khatar soo jireenka ah ee u diraya content kasta oo internetka. By ay aad u dabiiciga ah, website a iyo internet-ka oo aan la gabi ahaanba la ilaaliyo karo isku day galidda ula kac ah ama xaasidnimo ah. Awards Web Golden ma xakameeyo goobaha xisbiga saddexaad iyo internet ka badan oo aad ka dooran kartaa in ay u diraan macluumaadka shakhsiyeed ama caafimaad oo qarsoodi ah ama waxyaalaha kale iyo, Sidaa darteed, Awards Web Golden ma dammaanad dhowrid wax dhexda ama tanaasul in macluumaadkaaga. Marka dhajinta content kasta oo ku saabsan goobta internet ah, waa in aad si taxadar leh u malaynaysaa ku saabsan arimahaaga gaarka ah u gaar ah ee bixinta macluumaad faahfaahsan ama gaarka loo leeyahay naftaada iyo qoyskaaga ku saabsan. Intaas waxaa sii dheer, Awards Web Golden ma aqbalin wax soo saarka kasta oo, adeegyada, views ama content soo bandhigay by dadka kale ee goobaha warbaahinta bulshada Golden Web Awards.
By dhajinta kasta comments, posts ama qalab kale oo ku saabsan blogs Golden Web Awards ama goobaha warbaahinta bulshada, ku siin Awards Web Golden xaq u noqosho ma soo saari, qaybiyo, daabacaan, bandhigay, edit, beddelo, abuuro shuqullada derivative ka, iyo haddii kale isticmaali qoraalkaaga ujeeddo kasta oo nooc kasta ah iyo warbaahinta kasta.
Waxaad ogolaatay in aad indemnify doonaa Golden Web Awards wax magdhow, khasaare, masuuliyadii, xukummo, kharashka ama kharashyada (oo ay ku jiraan ujrada iyo kharashka qareenka) ka gaadho dacwada dhinac saddexaad oo la xidhiidha wax kasta oo aad posted.
Marka aad post a comment goobta a warbaahinta bulshada, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn: Twitter, Facebook, blogs, multimedia ama waxyaalaha kale ee user-ahbaa, waxaa la daabacay dunida si aad u aragto. Waayo, arimahaaga gaarka ah u gaar ah iyo in ka mid ah qoyskaaga, waa inaad ka fakartaa sida badan faahfaahsan shakhsiyeed iyo macluumaadka la xidhiidha magacaaga.
Macluumaadka soo ururiyey by codsiyada dhinac saddexaad waxaa loo isticmaali karaa ujeeddooyin marketing Golden Web Awards gudahood. Macluumaadka aan la iibin doono ama la wadaago.
Nidaamkani wuxu la simay laga yaabaa in waqti kasta ogeysiis la'aan, oo mar kasta oo user a helaa goob bulshada, siyaasadda cusub ee ay maamulaan, Isticmaalka, wax ku ool ah ku dul dhajinta.